Ukubuyela kwii-Asethi (i-ROA) Ratio kunye nokuZuza kwezeMali
Inyathelo lokuqala lokumisela inzuzo yokufumana imali kuba ishishini kukubala ishishini imbuyekezo kwimpahla (ROA) ratio , ongumlinganiso we-EBIT (umvuzo ngaphambi kwenzala kunye nerhafu yengeniso) kuyo yonke imali eyinkunzi etyalwe kwii-asethi ezisebenzayo.
Xa ishishini liqaphela isibonelelo semali sonyaka, oku kuthetha ukuba lifumana inzuzo engaphezulu kwimali eliyibolekileyo kunenzala ehlawulwe ngokusetyenziswa kwemali ebolekiweyo. Inxalenye elungileyo yengeniso yeshishini yonyaka inokubangelwa kukuphakama kwemali.
Nantsi indlela yokubala ukubuyiswa kwempahla (ROA) ratio:
Imiphumo emibi yexesha elide
I-EBIT assets Izinto zokusebenza ezikhoyo = I-ROA
Olulinganiso lusebenzisa ii-asethi zokusebenza, ezilingana neeasethi zizonke ngaphantsi kwamatyala okusebenza angabanjisi nzala . Ii-asethi zomsebenzi ezisebenzayo zibonisa inani elipheleleyo lemali eyinkunzi ekhutshwe kwityala kunye nakwimali yokulingana.
Thelekisa i-ROA kunye nenqanaba lenzala: Ukuba i-ROA yeshishini, yithi, iipesenti ezili-14 kunye nenqanaba lenzala kwityala lalo, yithi, iipesenti ezi-6, inzuzo yeshishini kwityala layo liyiipesenti ezisi-8 ngaphezulu kwento oyihlawulayo ngenzala.
Kukho ukusasazeka okuhle kwamanqaku ayi-8 (inqaku elinye = ipesenti enye), elinokuphindaphindwa amaxesha amatyala eshishini ukufumanisa ukuba ingakanani imivuzo yayo ngaphambi kokuba irhafu yengeniso ilandelwe kwinzuzo yokufumana imali.
Zithengisa kangakanani iiperococets
Kumzobo ongezantsi, qaphela ukuba ishishini linemali ezizigidi ezili-100 zeedola: $ 40 yezigidi zexesha elifutshane kunye ne-60 yezigidi zexesha elide. Inzala yabanini bayo iyonke $ 217.72 yezigidi. Ke ii-asethi zayo zokusebenza zizonke zizigidi ezingama-317.72 zeedola (ezingabandakanyi amatyala asebenzayo exeshana elifutshane angenamdla). I-ROA yenkampani, ke, yile:
$ 55,570,000 EBIT ÷ $ 317,720,000 yexabiso lokusebenza kwempahla = 17.5% ROA
Umzekelo webhalansi yeshishini.
Ishishini lafumana i-17.5 yezigidi zeedola (zijikelezisiwe) kwityala lalo liphela-iipesenti ezili-17.5 ze-ROA eziphindaphindwe ngezigidi ezili-100. Ishishini lihlawule kuphela i-6.25 yezigidi zenzala kwityala lalo. Ke, ishishini laline- $ 11.25 yezigidi zokufumana imali ngaphambi kwerhafu yengeniso ($ 17.5 yezigidi ezingaphantsi kwe- $ 6.25 yezigidi).
Umhla wokukhutshwa kwe-levitra generic
I-ROA ngumlinganiso oluncedo ekutolikeni intsebenzo yenzuzo, ngaphandle kokumisela inzuzo yezemali (okanye ilahleko). I-ROA yi Ukusetyenziswa kwemali vavanyo- yimalini inzuzo ngaphambi kokuba inzala kunye nerhafu yengeniso ifunyenwe kwitotali yenkunzi eqeshwe kwishishini. Uluvo oluphambili kukuba kuthatha imali (iiasethi) ukwenza imali (inzuzo); uvavanyo lokugqibela kukuba yimalini inzuzo eyenziweyo kwiiasethi.
Ukuba, umzekelo, ishishini lifumana i-1 yezigidi zeedola ze-EBIT kwii-asethi ezingama-25 ezigidi, i-ROA yipesenti ezi-4 kuphela. Ezo ROA ziphantsi zibonisa ukuba ishishini lisebenzisa kakubi iiasethi zalo kwaye kuyakufuneka liphucule i-ROA okanye lijongane neengxaki ezinkulu kwixa elizayo.
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-valacyclovir ixesha elide
iziphumo ezibi ze-benzodiazepines
zeziphi i-antibiotics ezonyanga usulelo lwe-sinus
Ngaba uvithamini c unyamezelwano olusezantsi
Yintoni i-croscarmellose sodium
ky jelly vs ulwelo